Shiinuhu Iska Difaaci Karo Difaaca Guud (Aan Jabin) Wax Soo Saarka iyo Warshadaha | Pantex
Iska tuurista ilaalinta guud, oo sidoo kale loo yaqaan dharka ilaalinta, dharka ilaalinta caafimaadka, gebi ahaan difaaca la iska ilaalin karo, ama kiimikada fayriska. Dharka badbaadada caafimaadku waxaa loola jeedaa dharka badbaadada ee ay isticmaalaan shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, nadiifiyeyaal, iwm) iyo dadka galaya goobo caafimaad oo gaar ah (sida bukaanka, booqdayaasha isbitaalka, dadka soo gala aagga cudurka qaba, iwm.) . Dharka ilaalada caafimaadku wuxuu leeyahay uumis wanaagsan iyo carqalad, wuxuu shaqeysanayaa iska caabinta galitaanka aalkolada, dhiigga, dheecaanka jirka, walxaha hawada kujira, iyo viruska bakteeriyada, si wax ku ool ah u ilaaliya badbaadada shaqaalaha isla markaana deegaanka ka dhig nadaafad.
Isticmaal keli ah, 'Pantex Coverall' looma loogu talagalay in loogu isticmaalo deegaanno aad u xun sida ICU iyo xaalad jilicsan
Waxyaabaha 100% non-tolmo PP + Xaragada PE, Miisaan wejiga: 65G / M2
Moodel Maya. PT-002
Qaabka zip xiritaanka hore, guntin laastikada ah, curcurka gacmaha iyo anqowyada, tologa gogosha
Muuqaal Duubay, biyuhu aan dabaysnayn, la neefsan karo, boodh-boodhka leh, khafiif ah iyo guryaha lidka ku ah
Xaddididda isticmaalka Qaabkan looma qorsheynin in loogu isticmaalo deegaanno aad u xun sida ICU iyo Xaaladda Sterile.
Xidhmada 1pc / polybag, 50 pc / kartoon ama sidii aad ubaahantahay
Hore: Qalliinka Cusbitaalka ee OEM / ODM - Quruxyada Qalliinka Caafimaadka ee la Daweyn karo (Sterile) - Pantex
Xiga: Maska ilaaliyaha ee Kn95